ခန္ဓာကိုယ်က နာကျင်တာကို ဘယ်သူမှ မကြိုက်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နာကျင်တာဟာ ခန္ဓာကိုယ်က တစ်ခုခု ဖြစ်နေပါတယ်လို့ အချက်ပေးနေတာပါပဲ။
ကိုယ်ခန္ဓာက ဘာကြောင့် နာကျင်တယ် ဆိုတာ တိတိပပ မသိရသေးခင် ဒါမှမဟုတ် နာကျင်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပျောက်ကင်းအောင်လုပ်လို့မရတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ နာကျင်တာကို သက်သာနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၇) ခုနဲ့ မိတ်ဆတ်လိုက်ပါတယ်။
၁. အသက်ရူသွင်း ရူထုတ် မှန်မှန်လုပ်ခြင်းဖြင့် နာကျင်ခြင်းကို သက်သာစေခြင်း
နာကျင်တဲ့အခါ လန့်ဖြန့်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်က အသက် ကို ခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့မြန်မြန် ရူမိတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအခါ ခေါင်းမူးတာတို့ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံတာမျိုး တို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နာတဲ့အချိန်မှာ ဖြေးဖြေးနဲ့ မှန်မှန်လေး အသက်ရူသွင်း ရူထုတ် လုပ်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းနေတာတွေကို ပြေလျော့စေပြီး နာကျင်တာကို သက်သာစေပါတယ်။
၂. လေ့ကျင့်ခန်း သက်သက်သာသာလုပ်ခြင်း
မလှုပ်လို့နာ၊ နာလို့မလှုပ် အဲ့ဒီလို လုံးလည်ချာလည် လိုက်နေတဲ့ နာကျင်ခြင်းတွေကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ဖြေးဖြေးချင်း လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ – လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်း စတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ခြင်းဟာ ဦးဏှောက်က နာကျင်ခြင်းကို သိဖို့လမ်းကြောင်းကို တိုက်ရိုက် တားဆီးပေးသလို ကြွက်သားတွေ အဆစ်တွေ အကြောတွေ တောင့်တင်းနေတာတွေကိုလည်း ပြေလျော့ စေပါသေးတယ်။
နာကျင်တဲ့အခါ နာတဲ့နေရာကို အာရုံမထားဘဲ တခြားတစ်ခုခု လုပ်ရင်း အာရုံ လွှဲထားကြည့်ပါ။ ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ အလုပ် လုပ်ရင်း လှုပ်ရှားရင်း တစ်ခုခုကို အာရုံလွှဲထားတာမျိုး။ ဒါမှမဟုတ် လည်း ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ သိုးမွှေးထိုးတာ၊ စာဖတ်တာ အစရှိတဲ့ လှုပ်ရှားမှု မပါတဲ့ အာရုံလွှဲခြင်းမျိုးလည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။
၄. ယောဂ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ ထိုက်ကျိ လေ့ကျင့်ခြင်း
ယောဂ နဲ့ ထိုက်ကျိ လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာ အသက်ရူ အသွင်းအထုတ် မှတ်ခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖြေလျော့ခြင်း နဲ့ ကြွက်သားတွေ သန်မာအောင်လေ့ကျင်ခြင်း စတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ တွဲဖက်ပြီး လေ့ကျင့်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လေ့ကျင့်သူရဲ့ နာကျင်ခြင်းကို နည်းပါးသွားစေတယ်လို့ လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေက ဖော်ပြထားပါတယ်။
နာကျင်မှုကို တာရှည် ခံစားနေကြတဲ့သူအများစုက အိပ်ဖို့ ခက်ခဲတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပုံမှန်အိပ်ချိန်ရဖို့ ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။
ဒါမှသာ တစ်ညလုံး မနိုးဘဲ တောက်လျှောက်အိပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အိပ်ချိန်မမှန် အိပ်ရေးပျက်တာက နာကျင်တာကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။ ညဘက် ပုံမှန်အချိန်အိပ်ပြီး မနက်ပုံမှန်အချိန်ထ ဖို့ခက်ခဲနေရင် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ဆီ အကူအညီရယူ သင့်ပါတယ်။
မသက်သာဘဲ တောက်လျှောက် နာကျင်နေတာကို လျော့နည်းစေဖို့ စိတ်ကိုဖြေလျော့တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုခုကို လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။
ဥပမာ – အသက်ရူသွင်းရူထုတ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ၊ တရားမှတ်ခြင်း စတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုခုကို လေ့ကျင့်ရင် အချိန်ကြာရှည် နာကျင်တာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
၇. သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ မိသားစုတွေနဲ့ အဆက်အသွယ် လုပ်ခြင်း
နာကျင်တဲ့အခါ တစ်ကိုယ်တည်း နေပြီး သူငယ်ချင်း၊မိတ်ဆွေ၊ မိသားစုတွေနဲ့ ဝေးကွာသွားတာမျိုး အဖြစ်မခံပါနဲ့။ အဆက်အသွယ် မပျက်ဘဲ ဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းက နာကျင်တာကို လျော့ပါးစေပါတယ်။
မကြာ မကြာ ဖုန်းပြောတာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် အဆက်အသွယ်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့နာကျင်ရတဲ့ အကြောင်းကိုပဲ တစ်ဘက်က သိချင်လို့ မေးနေရင်တောင် တခြား အာလာပ သလာပ အကြောင်းတွေကို စကားလမ်းကြောင်းလွှဲပါ။
ဒါမှ နာကျင်တာတွေဘက်ကို စိတ်မရောက်ဘဲ တခြား အကြောင်းအရာတွေ ပြောရင်း နာတာလည်း ပြေလျော့ပါလိမ့်မယ်။